Jubbaland iyo Puntland oo shaaciyey in shir la iskugu imaan doono Muqdisho - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaJubbaland iyo Puntland oo shaaciyey in shir la iskugu imaan doono Muqdisho
Garowe, August 28, 2020 (hornnews24) – War murtiyeed laga soo saaray shirkii wadatashiga Puntland iyo Jubbaland ee ka socday magaalada Garowe, Puntland, ayaa lagu sheegay in magaalada Muqdisho lagu qaban doono shir looga arrinsanayo arrimaha doorashada Soomaaliya ee 20/21.
Arrintaan ayaa timid kadib markii uu soo geben geboobay shir wadatashi ah oo ay magaalada Garoowe ku yeesheen madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe.
War murtiyeedka waxaa lagu sheegay intii uu socday shirka wadatashiga Garowe ay madaxda Puntland iyo Jubbaland khadka taleefanka kula hadleen madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada kadibna la isku af gartay in shir looga arrinsanayo arrimaha doorashada Soomaaliya ee 2020/2021 lagu qabto magaalada Muqdisho.
Jubbaland iyo Puntland ayaa hore u qaadacay shirkii Dhuusamareeb III oo ay ku tilmaameen in aan loo marin qabashadiisa wadadii saxda ahayd, sida muuqatana waxay ku guulaysteen labadaasi maamul in ay ka dhaadhiciyaan dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada in la qabto shir loo dhanyahay meeshana laga saaro go’aamadii shirkii Dhuusamareeb.
Halkan hoose ka akhriso war murtiyeedka Puntland iyo Jubbaland:-